ताजा अपडेट : ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आ क्र म ण गर्ने माथि भिम ब. शाहीको यस्तो जवाफ आए पछि ! (भिडियो) « Light Nepal
ताजा अपडेट : ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आ क्र म ण गर्ने माथि भिम ब. शाहीको यस्तो जवाफ आए पछि ! (भिडियो)
Published On :3October, 2019 10:47 am
काठमाडौँ , २० असोज हिजो चितवनमा भ्रष्टाचार निवारक अभियानकर्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आक्रमण गर्ने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन र अधिकारकर्मी र विपक्षी राजनीतिज्ञलाई सरकारले श कउभबप्का लाग्न सक्ने कुरा गरिरहेको छ कि सरकारले जानाजानी बोल्नेहरूलाई पक्राऊ गर्न खोजेको हो। यसको बिरूद्ध। ुनेपालका लागि नेपालीहरूु अभियान चलाउने शाहीलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एनसीपी० सँग सम्बन्धित कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेका थिए।
चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार प्रहरीले हालसम्म कुनै पनि पहिलो सूचना रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकेको छैन। “यद्यपि हामी पहिचान र अपराधीलाई पक्राउ गर्न विभिन्न स्रोतहरू प्रयोग गर्दैछौं। म छिट्टै आक्रमणकारीहरुलाई पक्रने आशा गर्दछु, ूमल्लले भनिन्।
शाहीमा भएको आक्रमण र अपराधीहरूलाई अपहरण गर्ने असक्षमताको कारण देशभरि रिस उठेको छ र धेरैले यो भनाइ छ कि पछिल्लो घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि ठूलो चोट पुर्‍याएको छ।
“सरकारहरूले आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई चुप गराउने झुकाव हुन्छन्। यो सरकारले पनि यस रणनीतिलाई सहारा दिएको देखिन्छ। यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ, ”स्वतन्त्र फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारन्थ दाहालले राजनीतिक नेता र रोल मोडेल लगायत सबै सार्वजनिक व्यक्तित्वहरुलाईू हिजोआज चितवनमा हिंसा जगाउन सक्ने हुनाले उत्तेजक भाषा प्रयोग गर्नबाट बन्चित गर्न आग्रह गरे। ू मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले उक्त आक्रमणलाई “राष्ट्रवादी आतंक” भन्यो यदि यो “राष्ट्रवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले” चलाए भने।
प्रसाले भने, ूसरकार र एनसीपीले आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ता लगायत सबैलाई स्पष्ट सन्देश पठाउनुपर्दछ कि हिंसामा संलग्न हुनेहरूलाई बचाउन नपाओस्ू प्रसाईले भने। ुअन्यथा भविष्यमा सत्तारुढ र विपक्षी सेनाबीच झडप हुन सक्छ।ु यसअघि नेपालगन्जबाट काठमाडौं उडान ढिलाइ गर्न ढिलाइ गरेकोमा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग कुरा गर्दा एनसीपीका केही कार्यकर्ता शाहीलाई दिक्क लागेका थिए। महिना यो घटनाले भट्टराईलाई नराम्रो प्रेस दियो।
पछि, एनसीपीका केही कार्यकर्ताले शाहीलाई भट्टराईलाई जानाजानी बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए ूकिनभने उनी एक मंडल थियो ९लोकतन्त्रवादी शक्तिले एकल पार्टीीय पञ्चायती शासनकालमा प्रजातान्त्रिक नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने पञ्चायत समर्थकहरूलाई दर्शाउने शब्द हो०ू।
“एक जनाले मण्डललाई हराउन सक्दैन किनकि त्यसले विगतमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई पिट्यो। प्रजातन्त्रमा पनि प्रतिरोधात्मक शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र कानून बमोजिम दण्ड दिनु पर्दछ। यो तानाशाही र फासीवाद र लोकतन्त्र बीचको भिन्नता हो। के हाम्रो साथीहरू सामाजिक फासीवादमा छिर्दै छन्रु ”समाजवादी पार्टी ल्भउब िनेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ट्विटरमा प्रश्न गरे।
नेपाली का भिबमभच्ग्रेस नेता गगन कुमार थापाले शाहीमाथि आक्रमण चिन्ताको गम्भीर कारण भएको बताउनुभएको छ किनभने यो उनको ुशाहीवादीु भएको बहानामा शुरू गरिएको थियो। ूयी घटनाक्रमले नेकाको धारणालाई सुदृढ बनाउँछ कि सरकार निरंकुश हुँदैछ,ू थापाले भने। यस घटनाको बारेमा पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण लिन त्ज्त् ले राष्ट्रवादी पार्टी प्रवक्तालाई धेरै चोटि सम्पर्क गर्न खोज्यो, तर सकेन। पार्टीले अहिलेसम्म यसबारे कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन।